Apple Music ichauya chete zvinyorwa: Chris | Ndinobva mac
Apple Music inongopa chete zvinyorwa: Chris
Isu tese tinoziva kufarira kwaApple kuvhura premieres paApple Music uye mune ino inyaya yakasarudzika yevashandisi vanonamata kunyorera kwavo. Iyo yakanyorwa: Chris, inhanho iri padyo yakananga French muimbi-munyori wenziyo Héloïse Letissier, uyo ane zita rechikuva Christine naQueens.
Mune ino kesi iri zvinyorwa zvinoratidza hupenyu hwega hweavo muenzi uye mairi inotaura nezvechikadzi chaanodzivirira uye nekugara achirwa kwaanowana zuva nezuva, zvese izvi zvinogona kuoneswa zvinoratidzwa mumimhanzi yake uye staging yemuimbi.
Fière et excitée de pouvoir vous présenter Chris mu concert avec @AppleMusic !
Joinha ini muParis kuitira yakasarudzika kuita uye kwakakosha kuongororwa kwe @applemusic zvipo: Chris.
Dururira assister au konzati / Nyorera matikiti emahara pano: https://t.co/VaPObTRMqK pic.twitter.com/xxXkRDrhqT
- Christ̵i̵n̵e̵ ̵a̵n̵d̵ ̵t̵h̵e̵ ̵q̵u̵e̵e̵n̵s̵ (@QueensChristine) 4 September we2018
Zuva rekuburitsa zviri pamutemo rakagadzirirwa Nyamavhuvhu 14 paApple Music
Kunyange zvazvo ichokwadi ichocho Chishanu wegumi nemana izuva rakasarudzwa zviri pamutemo kuitira kuti vese vashandisi veApple vafarire zvinyorwa, maawa asati aburitsa dambarefu idzva rakanzi "Chris" konzati yakasarudzika ichatepfenyurwa kune vateveri muParis. Mune konzati iyi muimbi anotarisira kuenderera achiputsa zvipingaidzo kuburikidza nenziyo dzake dzine simba uye dzehupenyu.
Iyo nyanzvi inotsanangurira vezvenhau kuti ndiye "Chris" uye nekudaro anozivisa zvizere mumitambo yake:
Chitupa chiri kugara chichivakwa, iwe unofanirwa kugara uchiongorora uye kuchichinjazve. "Chris" ndini, ndinonzwa kugadzikana mumhirizhonga iyi. Kunyora dambarefu kwakafanana nekuisa kutamba kukuru mumusoro mangu. Ose mamiriro anonakidza muhupenyu hwangu anogona kunditungamira kune chiitiko chandingaite. Kwandiri, danho inzvimbo yakachengeteka nekuti mairi ndinoona pfungwa yekugamuchirwa.
Pamusoro peiyo zvinyorwa Iyo nyanzvi ichapa album yayo paApple Music kubva munaGunyana 21, mazuva mashoma mushure mekuburitswa kweiyo zvinyorwa zvepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music inongopa chete zvinyorwa: Chris
Ko mini vhezheni yeiyo HomePod inosvika muKeynote munaGunyana 12?
Pasinei nezvose, chinhu chakanakisa kana uchifanira kutenga Mac kumirira kusvika Gumiguru